15/01/2016 – Gentleman Magazine
Quickie လေး ဘယျလို ဆှဲရမလဲ Quickie လေး ဘယ်လို ဆွဲရမလဲ Quick တွေက မိုက်တယ်လို့ ထင်ပါသလား?? မိနိးကလေးတွေလဲ အဲဒါကို ကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်မှပါ။ Quickie ကြိုက်သွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ?? ဒီအောက်က ကိုးချက်ကတော့ သင့်ကို Quickie
အချိန်ပြည့် စိတ်အားတက်ကြွနေစေဖို့ နည်းလမ်း (၅)ခု
အခြိနျပွညျ့ စိတျအားတကျကွှနစေဖေို့ နညျးလမျး (၅)ခု အချိန်ပြည့် စိတ်အားတက်ကြွနေစေဖို့ နည်းလမ်း (၅)ခု စွန့်ဦးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်ထူထောင်ရာမှာ အမြဲတမ်းစိတ်ဓာတ်တက်ကြွနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ လိုချင်တဲ့ရလဒ်တွေရရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအထမြောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက် အာရုံစူးစိုက်မှုအပြည့်နဲ့ အမြဲတမ်းစိတ်အားတက်ကြွနေစေဖို့ နည်းလမ်း(၅)ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ မနက်ခင်းမှာ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
အခြိနျကောငျးစောငျ့ရငျး အောငျမွငျမှု နောကျမကစြဖေို့ အချိန်ကောင်းစောင့်ရင်း အောင်မြင်မှု နောက်မကျစေဖို့ ဘ၀မှာ အားလုံးပြီးပြည့်စုံမယ့် အချိန်ကောင်းဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဒီတော့ အချိန်ကောင်းကို စောင့်နေမယ်ဆိုရင် အခြားသူတွေ မလိုချင်လို့ထားသွားတဲ့ လက်ကျန်တွေကိုပဲ ရရှိမှာ သေချာပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုစိတ်ကူးအိပ်မက်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ဖမ်းဆုပ်ရယူနိုင်ဖို့ အချိန်ကောင်းကို စောင့်နေမယ့်အစား အခုချက်ချင်းထပြီး